Maxkamad ku taala wadanka Kenya oo xukun ku riday laba nin oo Kenyan ah – SBC
Maxkamad ku taala wadanka Kenya oo xukun ku riday laba nin oo Kenyan ah
Posted by Webmaster on October 28, 2011 Comments
Maxkamad ku taala wadanka Kenya ayaa manta la hor keenay Laba nin oo Kenyan ah oo loo haysto Inay qeyb ka ahaayeen Xarakada alshabaab oo gacan ku haysa Deegano ku yaala Gobolada Xiga Xuduuda Kenya.
Omar Muchiri iyo Stephen Macharia, oo ah Kenyan ayaa waxaa ay Eedeynta maxkamada ku tilmaameen Been abuur iyaga oo doc iskaga riixay inay wax xiriir ah la leeyihiin Xarakada Alshabaab ee ka dagaalada Soomaaliya
Ciidamada Kenya ayaa nimanka u haysaty iyaga oo xiganaya Cadeymo laga helay Nin horey maxkamad Kenya ku taala ay ku xukuntay oo lagu magacaabo Elgiva Bwire Oliacha kaasi oo labadan nin sheegay inay u ahaayeen Caawiyaal waxaana ninkaasi uu horey u qiray inu ka mid yahay Alshabaab.
Sadexda Nin ee laba ka mid ah ay diideen eedeymaha loo haysto ayaa waxaa lagu qabtay howlgaladii ugu danbeeyay ee Ciidamada Kenya ay ka wadaan Gudaha Soomaaliya gaar ahaana gobolada ay gacanta ku hayaan Alshabaab.
Tan iyo intii ay biloowdeen howlgalada Ay ciidamada Kenya xuduuda uga soo talaabeen Afduubka dadkii Yurubiyaanka ah ka dib ayaa waxaa Dhacay Weeraro bambaano oo lagu qaaday Gudaha Kenya wallow aysan Xarakadu sheeganin Masuuliyada Qaraxyadaasi.
Isku soo wada Duuboo xarakada Alshabaab ayaa horey ugu hanjabtay inay talaabo Rasmi ah ka qaadi doonan Ciidamada Kenya ee soo galay gudaha wadanka Soomaaliya kuwaasi oo imaatinkooda uu hadalo badan ka dhaliyay Gudaha Soomaalida